कामदार अभाव पछि मलेसियाले नेपाली लैजाने, चाल्यो यस्तो कदम ! - jagritikhabar.com
कामदार अभाव पछि मलेसियाले नेपाली लैजाने, चाल्यो यस्तो कदम !
तीन वर्षअघि उत्पन्न सि’ण्डिकेट वि’वादका कारण रोकिएको मलेसियाको रोजगारी खुलेको छ । २०७५ सालमा सि’ण्डिकेट वि’वादपछि म्यानपावर कम्पनीहरूले नेपाली कामदार मलेसिया पठाउन सकेका छैनन् ।
मलेसियाले ३२ हजार विदेशी कामदार लिने निर्णय गरेसँगै नेपालमाथि लगाएको प्रतिबन्धसमेत फु’कुवा गरेको छ । नेपालबाट सुरक्षा गार्ड, उद्योग, कम्पनी र अन्य क्षेत्रमा मलेसिया सरकारले कामदार लिने घो’षणा गरेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
श्रमिकको अ’भाव भएपछि मलेसियाले केही संख्यामा विदेशी श्रमिक लिन लिएको नीतिभित्र नेपालसमेत परेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ ।
दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना नियन्त्रणका लागि निश्चित मापदण्ड अध्यागमन कार्यालयको माइट्राभल पास/माई इन्ट्री, मलेसियाको वैधा’निक भिसा, विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएको हुनुपर्ने, को’भिडको
परीक्ष’ण गरिएको नेगे’टिभ रिपोर्ट उड्नुभन्दा ४८ घण्टा अगाडि पेस गर्नुपर्ने माप’दण्ड राखेको छ । यसैगरी, मलेसिया पुगेपछि तोकिए अनुसार क्वारे’न्टाइन बस्नुपर्नेछ । भिसा लगायतका विषयमा कुनै कुरा बुझ्नु परेमा वेभसा’इटमा सूचना हेर्न सकिने दूतावासले जनाएकाे छ ।
मलेसियामा सिण्डि’केटका कारण बन्द हुनुअघिकै प्रक्रियाबाट कामदार पठाइने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मलेसियाको रोजगार खुल्यो भन्ने सुनिए पनि मलेसियाका तर्फबाट आधिकारिक जानकारी भने नआएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।